थ्री एमको क्रेज – मझेरी डट कम
‘कक्षा ११र १२का विद्यार्थीले विद्यालय हाता भित्र मोबाइल फोन प्रयोग गर्न नपाउने ।’मोबाइल आविस्कारकले मोबाइलको आविस्कार किन गरे होलान् ? एक पटक ठण्डा दिमागले सोच्नुहोस् त । के मोबाइल सजावटका लागि बनाएका हुन् त ? कि कुनै पटमूर्खहरूलाई तह लगाउने यन्त्रको रुपमा आविष्कार गरे । सुझाव प्रदान गर्ने विज्ञहरूले के सोचेर यस्ता सुझाव दिए । कि मोबाइल कम्पनीहरू रातारात धनी भएको देखेर औडाहाले सहन नसकेर केही हदसम्म भएपनि मन भित्रको जलनलाई कम गर्न यस्तो सुझाव दिए । चोक चोक गल्ली गल्लीमा मोबाइलमा बिक्री केन्द्र एवं मर्मत केन्द्रहरू खोलेर दुनियाका पैसा सोहोरेर थुप्रै कुम्ल्याए भनेर यस्ता किसिमका सुझाव दिन विवश भए त । कि मोबाइल कम्पनीले जनताका आँखामा छारो हाल्न टावरको क्षमताभन्दा दुगुना, तीन गुना बढी रिम/ सिम बिक्री गरेर गाँस कटाउदै जम्मा गरेको पैसा,दुःख गरेर कमाएको पैसा सबै लुड्यायो भनेर यस्तो प्रकारको अंकुस लगाएको त हैन ? नत्र भने यी सुझावदाताको कसले के गरेका थिए र । नूनको सोझो गर्न यस्ता गरेका हुन् भने कुनै आपत्ति छैन । हैन भने अर्काको मोबाइलमा व्यालेन्स सकिए पनि उसले व्यालेन्स हाल्दिनु पर्ने हैन । जतिसुकै फोन गरोस् । आफ्नो मोबाइल सेट जहाँसुकै बोकेर हिडोस् उसलाई अनावश्यक टाउको किन दखेको होला ? टाउको दुखेकै हो भने त घरको पर्खालमा टाउको ठोकेर मरे त भैहाल्यो नि । न गिनिज बुकमा नाम पो लेखिन्थ्यो कि ।